Iimveliso zeentyatyambo ze-CBD- Ivenkile ekwi-Intanethi ye-CBD
I-CBD kunye neHemp Flower ziyafumaneka ukuze zithengiswe kwi-Intanethi kwi-Red Emperor CBD. Zonke iimveliso zivavanywa ngumntu wesithathu kwaye ziza ne-14-day-back back gurantee.
I-CBD yeentyatyambo i-hemp 1 / 8oz-Cherry Wine | IZINTLALI EZIPHAKAMILEYO ZE-CBD
I-Cherry Wine CBD incike nzulu kudidi lwesithandwa lwenza ukuba ibeyintyatyambo ye-hemp egqibeleleyo kubo bonke abathandi be-hemp phaya. Iqabane elilungileyo lokulala xa ujonge ukugxotha obo busuku bude, obungenakuphumla kwaye uhambe nawe nohlobo lokuzola okokugqibela okuthenjiswe kwintengiso yeCalgon ukusuka ngasekupheleni kweminyaka yama-70.
Njengeglasi elungileyo yewayini, ezi hemp buds zilungele ukukwenza ukhumbule ukuba ubomi buhlala butyebile xa unokuthatha ixesha lokuyeka, ukhulule kwaye unuke iintyatyambo zetsheri.
Njengoko igama libonisa, i-terpenes kobu buhle buqhekeka ngesiqhamo esenziwe ngamatye amnandi agqunywe yipiney kunye nepepie yangaphantsi. Amanqanaba aphezulu e-b-Caryophyllene kunye neLinalool anika le budi ye-CBD yimpumlo etyebileyo kunye nefuthe lokunyanga. Ukongeza kwicala lakhe elimnandi, iCherry Wine ikwangumbane wamandla ocebileyo we-CBD okwaziyo ukuhambisa ibhalansi ethandekayo kunye nokutshaya.